Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Ihe mere Vietnam ji achọ ndị ọbịa Moroccan na ntụgharị ihu
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Prime Minista Moroccan bụ Saad Eddine El Othmani kwuru na nnabata maka Vo Van Thuong, onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, odeakwụkwọ nke Kọmitii Kọmunist nke Vietnam (CPV) na onye isi nke Kọmitii Kọmitii Central CPV ma ọ bụ Ozi na Mmụta, na ọbụbụenyi na imekọ ihe ọnụ n'etiti Vietnam na Morocco bụ ezigbo mmekọrịta na mmekọrịta chiri anya, nke etolitere n'oge mgba gara aga maka nnwere onwe mba nke mba abụọ ahụ.
PM Othmani rụtụrụ aka na mmekorita nke mba abụọ na akụnụba, azụmaahịa, itinye ego na ọdịbendị amabeghị ezi mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị n'etiti mba abụọ a yana ikike ha. Ọ chọrọ ịkwalite mmekọrịta a na Vietnam n'akụkụ dị iche iche ma na-agbasi mbọ ike ịkwalite mmekọrịta dị n'etiti gọọmentị abụọ ahụ.
Prime Minista na-atụ aro ka Vietnam na Morocco mee ngwa ngwa mejuputa nkwekọrịta nkwekọrịta, bịanyere aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbanwe ndị nnọchi anya niile, ma gaa n'ihu na-arụ ọrụ iji mepụta ọnọdụ dị mma maka mmekọrịta mmekọrịta siri ike n'etiti azụmahịa ha.
Vo Van Thuong kwughachiri Vietnamese Party na State iwu na-agbanwe agbanwe nke ọbụbụenyi ya na imekọ ihe ọnụ na mba niile maka udo na mmepe na mpaghara na ụwa ma na-enwe ma na-emepe mmekọrịta na ndị enyi ọdịnala, gụnyere Morocco, na-akọwa obodo ahụ dị ka otu nke Vietnam ndị mmekọ na North Africa. O kelekwara PM na gọọmentị Moroccan maka nkwado ha na ndoro-ndoro nke Vietnam maka oche na-adịgide adịgide na United Nations Security Council maka 2020-2021.
Thuong kwuru na Vietnam dị njikere ịrụ ọrụ dị ka akwa iji nyere Morocco aka ịgbasa mmekọrịta ya na mba ndị ọzọ ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ọkachasị na Vietnam ga-eweghara Onye isi oche ASEAN na 2020. O gosipụtara olile anya ya maka mmekọrịta siri ike na Morocco na mpaghara niile , kpọmkwem njem, ọdịbendị, ume dị ọcha, na ọrụ ugbo.
Mgbe ọ nọ na Morocco, Thuong zutere onye isi oche nke oflọ Ndị Nnọchiteanya Moroccan Habib El Malki, bụ nke kwuru na mmụba ụba nke ndị nnọchi anya ndị omeiwu ga-enyere aka iwusi mmekọrịta n'etiti mba abụọ ahụ ike n'ọdịnihu. Ọ kpọkuru onye omebe iwu Moroccan ka ọ lekọtara ma mepụta ọnọdụ dị mma maka mmejuputa nkwekọrịta nkwekọrịta nke gọọmentị abụọ binyere aka. Na nzaghachi, Malki kwuru na Houselọ Ndị Nnọchiteanya ga-esonye na Gọọmentị Moroccan iji chepụta usoro nlekota ọrụ mmekọrịta n'etiti mba abụọ ahụ, ebe ha na-akparịta ụka n'etiti ndị omeiwu Vietnam-Morocco Enyi na Enyi.
Thuong zigara Onye isi oche National Vietnamese Nguyen Thi Kim Ngan akwụkwọ ịkpọ oku nye Onye isi okwu ka ọ gaa nleta na Vietnam. N'ebe nnabata ahụ, ọ kpọrọ PM Nguyen Xuan Phuc ka ọ gaa leta gọọmentị na Vietnam n'oge na-adịghị anya. N'ime oge ya na Mịnịsta na-ahụ maka omenaala na nkwukọrịta nke Moroccan bụ Mohamed Laarej, ọ tụrụ aro ka mba abụọ a kwado mmekọrịta mba abụọ na mpaghara dị iche iche, ọkachasị njem, ihe nkiri sinima, pịa, akwụkwọ na nka.
Na June 17, Thuong nwere nzukọ dị iche iche na Onye isi ala nke Kansụl Mpaghara Casablanca-Settat na Gọvanọ nke Casablanca. Ekem ke June 14, enye ama eneme nneme ye mme adausụn̄ ke mbre inan̄ ke ukara n̄ka emi ẹdude ke Moroccan, emi ẹkedọhọde ke iyom ndisọn̄ọ nyịre ye CPV, akpan akpan ke ufọk Party ye mme ekpep n̄kpọ.
Thuong kpọrọ Vietnam ka o nyere Morocco aka ịkwalite mmekọrịta ha na mba ndị ọzọ ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na-ekwu na Morocco nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya, ọ ga-abụ onye na-elele ọgbakọ omebe iwu nke ASEAN. Akụkụ abụọ ahụ kwenyere ịbawanye mgbanwe nke ndị nnọchi anya niile ma jigide ịkekọrịta ozi na ahụmịhe, mmekọrịta ọdịnala n'etiti nzukọ ndị ntorobịa na ụmụ nwanyị, na mgbanwe ndị mmadụ na ibe.
Gọọmentị abụọ ahụ kwadoro ịhazi izu nke ọdịnala na mba ọ bụla iji mee ka nghọta dịrị n'etiti ndị Vietnamese na ndị Moroccan.